Shacabka Gobolka Silhiniileoo Go’aansaday In Ay Dabaqoodhiga Iska Celiyaan & Dagaal Dhacay | ogaden24
Shacabka Gobolka Silhiniileoo Go’aansaday In Ay Dabaqoodhiga Iska Celiyaan & Dagaal Dhacay
Wararka naga soo gaadhaya Degmada Erar ee Gobolka Shiniile ee wadanka Ogadenia ayaa sheegayaa dagaal faraha laysulatagay oo dhaawac badan gaystay oo dhex maray maamul kusheega Dagmada iyo dadka shacabka ah ee kudhaqan Dagmada Erar iyo nawaaxigeeda.
Sida xogta aan kuhelayno dadwaynaha kudhaqan magaalada Erar oo aad uga cadhaysan dhaqamada xun xun ee maamul kusheega Gobolka Shiniile kajira iyo ciidanka doolka kujooga Gobolku ay sameeyaan, kaas oo uu ugu dambeeyay falkii ciidanka dabaqoodhiga ah ee wayaanaha lashaqeeya ay ku kufsadeen Marwada ninkiidii uu lajoogay tuulada Biki.
Maamulka Gobolka Shiniile ayaa lasheegayaa in ay gurmad kasoo direen xarunta Gobolka ee Shiniile, hase yeeshee dadkii shacabka ahaa ee cadhaysnaa ayaa gurmadkii Gobolka mariyay wadadii ay mariyeen kooxdii Dagmada joogtay iyo ciidankoodiiba.
Wararkii ugu dambeeyay ee Gobolka Shiniile ayaa lasheegayaa in ay maamul kusheegii kusugan yihiin magaalada Dirdabe halkaas oo naftoodii ay kula baqdeen, waxaana lasoo warinayaa in ay shacabku udiyaar garoobeen dagaal ay lagalaan waxay ay ugu yeedheen kooxda Dib ucurashada.
Wixii war ah ee arimaha Gobolka Shiniile kasoo kordha kala soco ONA.